၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၄; ၁၇ နှစ် အကြာက (၂၀၀၄-၁၀-20)
Ubuntu 19.04 Disco Dingo / ၁၈ ဧပြီ ၂၀၁၉ (၃ နှစ် အကြာက) (၂၀၁၉-၀၄-18)
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish / ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ (၃ နှစ် အကြာက) (၂၀၁၈-၁၀-11)
ဦးဘွန်းတု၏ ထူးခြားသော အချက်မှာ အခမဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးဘွန်းတုအား ဦးဆောင်သူများက ၎င်းတို့၏ ဝက်ဆိုဒ်တွင် ဦးဘွန်းတုသည် အမြဲတမ်း အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ အိုင်တီလောကအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေမည့် အစီအစဉ်ပင်ဖြစ်သည်။ Installations CD/DVD များအားလည်း အခမဲ့ မှာယူရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၀ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Shipit အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ Ubuntu Loco Team များမှတစ်ဆင့်သာ မှာယူရရှိနိုင်သည်။
Ubuntu Archived9October 2009 at the Wayback Machine.
Xubuntu Archived 22 June 2010 at the Wayback Machine.
Edubuntu Archived6February 2015 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဦးဘွန်းတု&oldid=742900" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။